Puntland ayaa Dalbatay in la dhiso Maamul Goboleedyo Horle | maakhir.com
March 24, 2008 in Somalia
Garoowe:- Maamul Goboleedka Puntland ayaa Dawlada Federaalka ah u soo bandhigay qorshe ah in la dhiso Maamul Goboleedyo horle, Maamulka Puntland waxay arinkaasi ku macneeyee ka dib markii ay dhawaan Gobolada Badan magcaabeen Maamulka Gooni isu taag ah ee Somaliland, hadalkaasi ayaa waxa shaaciyay Madaxwayne Xigeenka Puntland Mr Afqudhac.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Xasan Daahir Max’uud ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtey magaalada Garoowe ee xarunta Maamulka Goboleedka Puntland wuxuu kaga dalbatey dawlada KMG ah dhismaha maamul goboleedyo la mid ah Puntland si buu yiri loo hirgaliyo nidaamka is maamul goboleedyada ee Federaaliga ah dalka oo idil.
Hadalkan ayuu jeediyey madaxweyne kuxigeenka isagoo si xoogan uga horyimid war ka soo baxay maamulka Somaliland oo ku aadan in qaar ka mid ah Gobolada Puntland Somaliland u magacowdey gobolo hor, wuxuuna ku tilmaamay taasi inay tahay riyo uu riyooday Riyaale isaga oo soo jeeda waxana uu ku til mamaay mid aad looga naxo.
Hadal ka soo yeedhay Maamul Goboleedka Puntland ayaa waxa la saadaalinayaa inay fulindoonto DFS maadaama haatan ay wadaan Maamulka Somaliland qul qulatooyin la doonayo in lagu kala qaybiyo Dalka Somaliya isla markaana wax lagu yeelo Nabada Geeska Afrika.
« Warbixin ku saabsan Kalluunka Xeebta Laaqoray ee Gobolka Sanaag
Wafti balaadhan oo ka socta EU-da ayaa soo gaadhay Muqdisho »